Isniin, Oktoobar 26, 2009 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Haddii aad dooneysay inaad baarto qof caan ah oo awood u yeeshay inuu dib ugu dhiirrigeliyo xirfaddooda warbaahinta bulshada, tusaalahayga koowaad wuxuu ahaan lahaa MC Hammer. Qof kastaa wuu arkay Behind The Music iyo kor u kaca iyo dhicitaanka MC Hammer oo ah astaan ​​caan ah. MC Hammer wuxuu si wax ku ool ah uga faa'iideystay baraha bulshada si uu mar labaad isugu celiyo dhaqan casri ah. Haddii aad ka labalabeysay dhageysiga… ha sameyn. Isagu waa shaqsi saaxiibtinimo leh, caqli badan oo is-hoosaysiiya - oo ku habboon
John Jantsch wuxuu weydiinayaa su'aal weyn, Ma haysaa Baraha Bulshada ee aan Tartanayn? Su’aal kale ayaa noqon karta, “Shirkad ma dhaqan gelin kartaa baraha bulshada oo aan la tartami karin?” Maxkamaduhu dhaqan ahaan way ka xishoodeen xayiraadaha ay ku soo rogeen shaqo-bixiyeyaasha xuquuqda shaqaalahoodu ay u leeyihiin inay helaan oo ay ku noolaadaan. Maaddaama shirkado badan lagu qasbay inay adeegsadaan warbaahinta bulshada ayna ku dhiirrigeliyaan shaqaalahooda inay kaqeyb qaataan, sidee uga filan karnaa shaqaalihii hore inaysan ka qaybqaadan? Waa ciriiri shirkadaha, laakiin
Markaan uhadlayo, sidaan maantaba uhadlay, dhagaystayaasha ganacsatada xiisaha uqaba blogga, kani waa bayaan inta badan nal nalka madaxooda u roga. Haa. Waad dhexdhexaad ka noqon kartaa faallooyinka. Haa. Waa caadi inaad diiddo faallo diidmo ah. Waxaan kula talinayaa dhammaan ganacsiyada inay faallooyin dhexdhexaad ah ka bixiyaan. Waxaan sidoo kale ku dhiirigelinayaa isla ganacsiyadaas, in kastoo, ay falanqeeyaan fursadda iyo halista la xiriirta faallooyinka xun. Haddii ay tahay dhaliil wax dhisaysa taasi waa mid waxqabad leh